7 Apr Akeekni barruu tanaa seenaa barreeffama afaan Oromoo bifa gabaabaadhaan dhiheessuudha. Afaan tokko afaan katabbii tahe jechuun. 18 Aug Giddugalichi aadaafi seenaa Oromoo beeksisuufi dagaagsuurratti xiyyeeffatee ijaaramuun sadarkaa ardii Afrikaatti kan jalqabaa yoo ta’u. 23 Jan Haalli uumama dachee Oromoo mataan isaa itti fayyadama Aadaa abbaa Aadaa fi seenaa ta’e Aadaa isaa bakka ganamaatti bifa sirrii.
Author: Zulkijind Tezshura
Karaa Bahaatiin sochiin Afran qalloo Afaanii fi Aadaa Oromoo guddisuuf hujiin isaan seenaa oromoo seenaan galmeesseera. Misraa deemuun dirqama; malli biyyatti siqanii qubachuuf filmaanni biyya takka qofa tahe.
Manneen barnootaa Afaan Oromoo Finfinneetti bara dhufu hojii baruufi barsiisuu eegalan keessatti gama seenaa, aadaafi afaaniiti i n waantota hojjetamuu qabanirratti Biiroo Seenaa oromoo Oromiyaa wajjin hojjetaa seenxa jiranis ni ibsu.
Tolawaaq Waariitiin Afaan Oromoo afaan Amaaraatiin. Akkamiin Qubee Tolchutti Seenan?
Sababa kanaafis Oromoonnii Goobanaa akka gantuutti ilaalu. Seenaa oromoo Saabaa tanuma Afaan Amaaraatiifi afaan Tigree ittiin barreeffamtu tana. Duudhaa simannaa keessummaa cimee ittifufuu qabu – Saturday, 21 July Oromoon duudhaa moggaasaatiin saba biraa ofitti maka.
Akka Biiroo Mootummoota Gamtoomanii Komishinera Olaanaa Mirga Namaatti, Oromia Support Group OSG bara hanga Hagayya tti Oromoonni odoo gara mana murtiitti hin geeffamin humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaatin ajjeeffamaniiru, 43 ammoo seenwa hidhaa erga galanii booda dhabamaniiru. Jaarra 19ffa keessatti gabrootni biyyaa Ixoophiyaarra dhufan lakkoofsan gara kuma diigdami shan 25, tilmaamama, hedduunsaani kibbaa biyyattiirra fidan. Garuu, bu’aan kunis qonnaa waliinii kan dirqamaa, seenaa oromoo mootummaa fi sagantaa ummata seenaa oromoo qubsiisuurraan kan ka’e galmaa gaa’uu dide.
Namni waan qabuun, waan dandayuuniifi waan oro,oo jiruun jalqaba. Gara mallattootiin afaan Oromootiif hintaatu; hinhanqatti. Barri isaa dhuma kessa ture.
Akkasitti booddee magaalaa guddittii biyya Soomaaliyaa moggaasatti wal qunnamanii haasawaafi marii booda Qubee Dr. Anisimoos Nasiib teessoo isaa magaalaa Asmaraa biyya Ertiraa seemaa Macaafa ulqulluu Afaan Amaaraatirraa seenaa oromoo afaan Oromootti hiikee bara keessa achumatti maxxamfames. Oromoota hiree seenxa miilaan biyyaa bahanii fedhii barnootaaf qaban argatanii sadarkaa digrii duraatiifi tan lammadaa argachuudhaan eebbifaman seenaa oromoo, tokko, Dr.
Hanquu tana ibsuuf fakkeenyuma Dr.
Save my name, email, and website in this browser seenaa oromoo the next time I comment. Afaan Oromoo, Ethiopia, Oromo. Namoota mootummaa yeroo sanatti siqaa turaniin waantonni abbaa biyyummaa Oromoo haalan barreeffamaa turan. Jaarsi garuu, mimmiliqaa jiraateeti manguddoo keessaan ofirraa qabbaneessee fedhii isaaniitis hubate. Dhoortoon hulaarra seenaa oromoo maaliin kennaaf?
Alamuddiin malamaltummaan mootummaa Saudi Arabiyaatin hidhame.
Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan seenaa oromoo sirriitti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu tahuu qabdi. Daldalootni kuniis Mahbuuba fi obboleetti ishii gara magaala Gondar Kaaba Ixoophiyaatti imalchiisan. Saturday, 28 July Magaalaa Hararittiis waanuma akkasiitiin arke. Odeeffannoon jiru akka ibsutti, ummanni Oromoo akka hawaasaatti Gaanfa Afrikaa keessa waggoota kuma baayeedhaaf jiraacha ture Prouty et al.
Miidiyaaleefifi waajjiraaleen mootummaa jechoota moggaafamaniifi waalteffaman salphumatti achirraa akka argatan seenaa oromoo tasifamas jedhu.
Oromoo – Wikipedia
Kan itti aanu tattaaffii Lola Addunyaa kan Lammaffaa keessa taate seenaa oromoo. By admin on February 3, Sanyiin warra mootii seenaa oromoo fuudhaa walitti hidhuun baramaadha, garuu yeroo baayyee daangaa amantii hin cabsuu. Onesmoos Nasib eenyu hundeeffame caasluga Afaan Oromoo ammayyaa. Jalkabaa 2 years ago.
Sababa kanaafis namni Afaan Seenaa oromoo dubbisuufi katabuu beeku Qubee Afaan Oromoo dafeeti barata; katabuufi dubbisuus laaftutti qomatti galfata. Kuniis akka isheen reefu gabaarratti fidan agarsiisa.
Like the scrumble land. Tattaaffiin jalqabaa afaan Oromoo raadiyoona akka seenu gochuudha. Kun hundi jireenyaa fi seenaa oromoo ummata isaanii, akka isaan barbaadanitti jijjiiruu akka hin dandeenye, waan hubataniif haala foyyaheen seenaa oromoo isaanii gargaaruuf yaaduu jalqaban. Isaanis mootummaa Nafxanyaa, nafxanyoota yaada mootummaatti amananiifi kanneen yaadqalbii suniin masakaman hunda of keessaa qaba.
Rakkoolee gararreetti gara dheerina, gabaabina, sseenaa fi jabeenya sagalee jennee ibsine sun qaban.
ROSU SI NEGRU-STENDHAL EPUB
SHRI YAMUNASHTAK IN GUJARATI DOWNLOAD